Lwesithathu 13 Januwari 2021
Ifenisha Yobheseni Ugqozi lomklami lwaluqhamuka ekubumbeni okuncane kakhulu futhi ukulisebenzisa njengento ethule kepha eqabulayo engxenyeni yokugezela. Kwavela ocwaningweni lwamafomu okwakha kanye nevolumu lejometri elilula. Isizinda singase sibe yinto echaza izikhala ezahlukahlukene ezizungeze ngasikhathi sinye isikhungo sikhomba esikhaleni. Kulula ukuyisebenzisa, ihlanzekile futhi ihlala isikhathi eside. Kunokwehluka okuningana kufaka phakathi ukuma wedwa, ukuhlala ebhentshini nodonga olufakwa phezulu, kanye nokushona okukodwa noma okuphindwe kabili. Ukwehluka ngombala (imibala engu-RAL) kuzosiza ukuhlanganisa umklamo esikhaleni.
Lwesibili 12 Januwari 2021
Umqondo Wokupakisha Emhlabebeni wanamuhla, abantu bahlala bechayeka emiphumeleni enolaka yezinto ezingezinhle zangaphandle. I-ecology embi, isigqi esimatasa sokuphila kuma-megalopolises noma izingcindezi kuholela emithwalweni eyandayo emzimbeni. Ukulungisa nokwenza ngcono ukusebenza komzimba, kusetshenziswa izithasiselo. Isingathekiso esiyinhloko salesi projekthi sibe ngumdwebo wokwenza ngcono inhlala-kahle yomuntu nokusetshenziswa kwezithasiselo. Futhi, isakhi esiyinhloko semifanekiso siphinda ukwakheka kwencwadi F - uhlamvu lokuqala egameni lomkhiqizo.
Msombuluko 11 Januwari 2021
Indlu Umdwebi womqambi wavela ngokhuni oluyisisekelo lwe-eucalyptus lwe- “bateas”. Lawa amapulatifomu wokukhiqizwa kwezimbaza ezigodini zezihlahla futhi akha imboni yasendaweni ebaluleke kakhulu “eRia da Arousa”, Spain. Kusetshenziswa ukhuni lwe-eucalyptus kulezi zingxenyekazi, futhi kukhona ukunwetshwa kwalesi sihlahla esifundeni. Iminyaka yezinkuni ayifihlekile, kanti nobuso obuhlukile bangaphandle nobungaphakathi bezinkuni busetshenziselwa ukudala imizwa ehlukene. Indlu izama ukuboleka isiko lendawo ezungezile futhi iveze ngendaba esetshenziswe ekwakhiweni nasencwadini.
Sonto 10 Januwari 2021
Indawo Yokudlela Umnyango ungumbukiso wezinto zokwakha ezihlukile, izakhiwo, nemibala. Indawo yokwamukela indawo iyindawo yokuthula yokuzola. Amaphethini amahle ahlangabezana nokuhlobisa okudlalayo. Ngemuva kuyindawo yebha eguquguqukayo ngaphakathi komongo wokuphumula. Umlingisi waseShayina wendabuko uHii iphethini ekhokhelwa uveza umuzwa wekusasa. Ukudlulela endaweni yokuhlobisa ophahleni ehlotshiswe kahle yindawo yokudlela. Ihlotshiswe ngezimbali zezinhlanzi zezimbali, ezihlotshiswe nge-carob, zifakwe esikrinini seglasi kanye namakhabethe asendulo e-heri eBai Zi, kuwukuhamba okubukwayo ngesikhathi nangezenzo zezinto zesiko ezimfashini.
Mgqibelo 9 Januwari 2021
Indawo Ethengisayo Isitolo semibono yePortugal Vineyards isitolo sokuqala esingokomzimba senkampani ekhethekile ye-inthanethi ye-inthanethi ye-inthanethi. Kufakwe eduze kwekomkhulu lenkampani, libheke umgwaqo futhi linabantu abangama-90m2, isitolo siqukethe uhlelo oluvulelekile olungenakho ukwahlukaniswa. Ingaphakathi liyindawo emhlophe ngokungaboni futhi encane kakhulu ngokujikeleza okujikelezayo - isikejana esimhlophe ukuze iwayini lePutukezi likhanye futhi liboniswe. Amashalofu aqoshwe ngaphandle kwezindonga ngokubhekisele kumathafa ewayinini onolwazi lokuthengisa okuyi-degrees angama-360 olungena-counter.
Lwesihlanu 8 Januwari 2021
Ubuciko Isiza sisendaweni yaseKuihin Industrial engaphandle kweTokyo. Ukukhokhiswa kwentuthu ngokungaguquki okuvela kumafemu wezimboni ezisindayo zezimboni kungaveza isithombe esingesihle njengokungcola kanye nokuthanda izinto ezibonakalayo. Kodwa-ke, lezi zithombe zigxile ezicini ezihlukile zezimboni eziveza ubuhle bawo obusebenzayo. Emini, amapayipi nezakhiwo zakha amaphethini wejometri ngemigqa nangezakhiwo kanye nesikali ezikhungweni ezihlanganisiwe kudala umoya wesithunzi. Ngobusuku, izikhungo ziguqukela kunqaba eyinqaba yendalo yonke yamafilimu ama-sci-fi ngawo-80.
Ifenisha Yobheseni Umqondo Wokupakisha Indlu Indawo Yokudlela Indawo Ethengisayo Ubuciko